Ukusebenza ngokuzwana kuletha impumelelo eqenjini | News24
Ukusebenza ngokuzwana kuletha impumelelo eqenjini
UMQEQESHI weMamelodi Sundowns uPitso Mosimane uthi umoya wokuzwana, nokusebenza kweqembu ngokubambisana ikona okwenza iqembu liphumelele.
UMosimane ebuzwa ngemfihlo yokuphumelela kweqembu le-Sundowns uthe, “Okubaluleke kakhulu bekuwukusebenza njengomndeni.”
“Ukuzwana eqenjini kuhamba indawo ende futhi kuletha imiphumela emihle.” Lomqeqeshi uthi uKhama Billiat ozalwa eZimbabwe wafika ePitoli ezejoyina ezakhe AmaBrazilians ngesikhathi evela kwi Ajax Cape Town enokusaba kancane ngoba phela ithimu inkulu.
UMosimane uthi nokuza eGauteng ebe kade ejwayele iKapa kwakumuxaka kancane lomdlali. “Into engayenza noma esayenza njengomndeni weMamelodi Sundowns ukuhlala phansi noBilliat simtshele ukuthi sizomxhasa futhi kufanele azi ukuthi uwumdlali webhola oseqopheleni eliphezulu yingakho simlande kwiAjax Cape Town. Lokho nje kukodwa kwamenza wakhululeka futhi wazibona amamukela ngezandla ezifudumele.
Njengomqeqeshi wakhe ngabuya ngasondelana naye ukuze ngisebenze ekucubunguleni indima yakhe esiyifuna adlale ngayo, nokuthi angenza kanjani ukuze abe umdlali ongcono. Ngamtshela futhi ukuthi angashaya amagoli amaningi noma angakha amathuba amaningi, asize ozakwabo ukuthi nabo bashaye amagoli. Kanti-ke uma ubheka amagoli ashaywe yiSundowns kulesizini, uBilliate usize kakhulu noma naye uqobo uzishayele ngokwakhe,”kusho uMosimane.
UMosimane uthi yena akazange amangale uma lomdlali eseqoqa kwasani ngesikhathi kunomncimbi wemiklomelo yePSL. “Ngingathi nje mina njengomqeqeshi wakhe kanye nozakwabo eqenjini lilonke nje, asimangalanga noma asithukanga. Phela uBilliat usebenze kanzima kulesizini futhi ubelekelela wonke umuntu eqenjini. Ubewumdlali othandwa yiwo wonke umuntu futhi ehlale ekulindele ukusiza ekwakheni amagoli nokusiza abadlali abalahlekelwe ifomu noma abasasaba ukudlala kwi Sundowns,”kusho uMosimane.
Abathandi bebhola eMzansi bazokhumbula ukuthi lomdlali waseZimbabwe udle umhlanganiso ngokuqoqa imiklomelo emithathu emcimbini wokuphela kwesizini yePSL. Ube umdlali ovelele wonyaka, waba ngumdlali okhethwe ngabanye abadlali nabaqeqeshi obachazile kulesizini,wagcina ngokuba umdlali wasesiswini obashaye bonke emakhanda. Kanti nomqeqeshi weqembu lamaBrazilians (Mamelodi Sundwons), uMosimane ubuye wadla umhlanganiso ngokuba umqeqeshi ovelele kulesizini.
Mhlawumbe ekubongeni ukuvundulula amakhono noma ukuletha abadlali abaseqophelweni eliphezulu kwiSundowns asithulele isigqoko owayengumqeqeshi weBafana Bafana nowadlala kakhulu kwiMoroka Swallows nakumaBrazilians, uTrott Moloto.